Izizathu ezingakumbi zoBulungiseleli bezomthetho ukuthatha ilizwe lakho
Ukupapashwa kokuqala: Julayi 5, 2005
Kwisigqibo sawo esingu-5-4 kwimeko yeKelo v. Isixeko saseNew London, iNkundla ePhakamileyo yase - United States yakhipha into ebalulekileyo, ukuba inokuphikisana, ukuchazwa kwamandla karhulumente "kwintsimi ebalulekileyo," okanye amandla karhulumente ukuba athathe umhlaba kubanini bepropati.
Igunya lesigqeba esisemgangathweni linikezelwa kumagunya karhulumente - umbuso , urhulumente kunye nommandla - ngo-5 uhlengahlengiso kuMgaqo-siseko wase-US, phantsi kwegama elilula, "... kwaye akukho propati yabucala ingathathwa ukuze kusetyenziswe uluntu, ngaphandle kwembuyekezo . " Ngendlela elula, urhulumente angathatha ummandla wabucala, xa nje umhlaba uza kusetyenziselwa uluntu kwaye umnini uyahlawulwa intlawulo efanelekileyo yomhlaba, okokuthi ukulungiswa kukubiza, "ngumvuzo kuphela."
Ngaphambi kweKelo v. ISixeko saseNew London, izixeko zixhaphaza ngamandla abo ezikwimimandla ephakamileyo ukuze zifumane ipropati yezixhobo ezicacileyo ezijoliswe ekusebenziseni uluntu, njengezikolo, iifranti okanye amabhuloho. Ngelixa izenzo ezinje zengingqi zidlalwa njengezinto eziphazamisayo, ziyakwamkelwa ngokubanzi ngenxa yenzuzo yazo jikelele kuluntu.
Iimeko zeKelo v. ISixeko saseNew London, kodwa ke, zazibandakanya umgaqo omtsha phakathi kwimizi yokusebenzisa i-domain ephezulu ekufumaneni umhlaba ukuhlaziywa okanye ukuvuselelwa kweendawo ezidandathekileyo. Ngokusisiseko, ukusetyenziswa kwetlasi ephezulu kwizentlalo, kunokuba iinjongo zikawonkewonke.
Isixeko saseNew London, iConnecon saphuhlise iprogram yesicwangciso sokuphuhliswa kweso sixeko sakwabazali sithemba ukudala imisebenzi kunye nokuvuselela imimandla yasemadeni ngokuvelisa imali eyongezelelweyo yentlawulo. Umnini wepropati uKelo, nangona emva kokunikezelwa kwembuyekezo, inselele into eyenziwa, isithi isicwangciso sesixeko somhlaba asizange sibe "ukusetyenziswa koluntu" phantsi kweSihlomelo sesihlanu.
Kwisigqibo sakhe ngokusondeza iNew London, iNkundla ePhakamileyo yabe isetyenziselwa ukutyelela "ukusetyenziswa koluntu" njengegama elibanzi, "injongo kawonkewonke." Inkundla ithe yaqhubeka ibonisa ukuba ukusetyenziswa kwesidima esiphezulu ekukhuthazeni uphuhliso lwezoqoqosho kuyamkeleka ngokomgaqo-phantsi kweSihlomelo sesihlanu.
Nangona emva kweSigqibo seNkundla ePhakamileyo kwiKelo, ubuninzi bezenzo zamandla eziphezulu ziza kubandakanya umhlaba ukusetyenziswa ngokusetyenziswa koluntu kuphela.
Inkqubo Yesiqhelo Eyona Eyona Ndawo
Nangona iinkcukacha ezichanekileyo zokufumana ipropati ngegama eliqhelekileyo zihluka ukusuka kumandla-kuya-lawula, inkqubo isebenza ngokubanzi njengale:
Umnikazi wepropati uyakwaziswa ngeposi kwaye uza kuhanjelwa ngumqeshwa karhulumente ngokukhawuleza, ngokuqhelekileyo ukuba yi-arhente "ye-right-to-way", oza kuqhubeka uchaza ukuba kutheni umnikazi wepropati iyadingeka.
Urhulumente uya kuqesha umntu onokuzimelela ukuba ahlalutye umhlaba kwaye afike ngexabiso elifanelekileyo ukuhlawula umnini-mhlaba ngenxa yomhlaba wakhe-"ngumvuzo."
Umnini wepropati kunye noorhulumente banokuthintana ukuba bafike ngexabiso lokugqibela elihlawulelwayo umnikazi wepropati. Kwezinye iimeko, ijaji okanye ummeli otyunjelwe yinkundla uya kubizwa ukuba ajongise uxoxiswano.
Umnini uyahlawulwa ixabiso elivunyelweneyo kunye nobunikazi bendlu leyo idluliselwa kurhulumente.
"Iingelosi eMelika" nguTony Kushner
Indlela Yokuguqula Inzondo Yothando